राप्रपाका अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज - Himal Dainik
काठमाडौँ ९ कार्तिक २०७७, आईतवार १९:०६
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गत असोज ३० गते ओम अस्पतालमा भर्ना भएका अध्यक्ष थापाको स्वास्थ्यमा उल्लेख सुधार भएपछि अस्पताल बाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
उनलाई टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई आइसीयुमा राखेर उपचार गरिएको राप्रपा केन्द्रिय सचिवालय सदस्य राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए । डिस्चार्ज पश्चात उनले उपचारमा संलग्न चिकित्सक,नर्स सहित सबै स्वास्थकर्मी, अस्पताल संचालक र अस्पताल व्यवस्थापन समिती कर्मचारी सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उनको उपचारमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर एवं सिनियर कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ काेईराला, सिनियर कनस्ल्ट्यान्ट पन्मनाेलाेजिस्ट डा. सुबाेध ढकाल, कन्सल्ट्यान्ट इन्टेन्सिभिष्ट डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ, डाक्टर बिपिन कार्की लगायतकाे डाक्टर र नर्सहरुकाे टिम संलग्न रहेकाे थियो।
१० दिनको अस्पताल बसाईपछि डिस्चार्ज भएका अध्यक्ष थापा बुढानिलकण्ठ पासिकोटस्थित निबासमा रहने बर्तौलाले जानकारी दिए ।
अघिल्लो२४ घण्टामा थप २८ सय संक्रमित थपिए, ५ को मृत्यु
पछिल्लोजोडीलाई यती एअरलाइन्सको दशैँ अफर